Horjooge Sare oo ka tirsanaa Maleeshiyada Al-shabaab oo iska dhiibay Baydhabo – Radio Muqdisho
Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Bay ayaa sheegay in halkaasi uu iska dhiibay horjooge sare oo ka tirsanaa Maleeshiyada Alshabaab,kaasi oo haatan uu gacanta ku hayo maamulka Koonfur Galbeed.
Sarkaalkan oo maanta isku soo dhiibay ciidanka booliska gaarka ah ee Koonfur Galbeed ayaa lagu magacaabaa Aadan Maxamed oo ku magic dheer(Aadan SHaah).
Saraakiisha ammaanka Koonfur Galbeed ayaa lafilayaa in dhawaan ay saxaafadda u soo bandhigaan macluumaad ku saabsan horjoogahan is soo dhiibay,kaasi oo haatan su’aalo ay weydiinayaan hay’adaha amniga.
wararku waxay sheegayaan in uu koxda Alshabaab u qaabilsanaa fulinta weerarada arbushaadka ah,gaar ahaan deegaano gobolka Bay,waxaana la sheegayaa in marka uu isku soo dhiibay ciidamadu uu la socday qof kamid ahaa maleeshiyaadka shabaab oo ay isla soo goosteen,iyagoo wata hubkooda.
Todoboodyo ka hor ayaa waxaa sidoo kale is soo dhiibay horjooge kale oo lagu magacaabo Maxamed Caddo woo u qaabilsanaa maleeshiyada Alshabaab qeybta qaraxyada ee Gobolada Bay,Bokool iyo Gedo.